Jimi Mistry – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
2012 (2009) Unicode ဇာတျကား တဈကားရှိတယျ အဲ့ကားက မွောကျကိုရီးယာမှာ ကွညျ့ရငျ သဒေဏျထိ ဖွဈနိုငျတဲ့ ပွဈဒဏျဖွဈတယျ။ အာ့ဆို အဲဒီ ဇာတျကားက ဘာကားမို့လိုလဲ 2012မှာကမ်ဘာပကျြတဲ့ အကွောငျး ကို ရှုပျရှငျရိုကျပွထားတာဗြ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျ မွောကျကိုရီးယာကလညျး 2012က သူတို့ တိုငျးပွညျထူထောငျးခွငျးနှဈရာပွညျ့ဗြာ အဲနှဈမှာ ဘာဖွဈရမယျဆိုတဲ့ ဘလာဘလာဘလာ ရညျမှနျးခကျြ တှရှေိတယျဗြ ထားပါတော့ တကြောငျးတဂါထာပေါ့ သခြောတာက 2012 ဆိုတဲ့ကားက အခုထိ ကမ်ဘာပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးမှာ ဆှနှေေးငွငျးခုနျစရာ အတှေးအချေါအယူအဆတှေ အမြားကွီး ရှိနခေဲ့တယျ အကွောငျးကတော့ ဇာတျကားကတော့ သဘာဝဘေး လူလုပျဘေးတှကွေောငျ့နဲ့ ကပျဆိုကျပကျြစီးသှားတယျ နောကျတခကျြက ရှခေ့ေါတျ မာယနျးလူမြိုးတှရေဲ့ ပွက်ခဒိနျ မှာလညျး 2012က နောကျဆုံးဖွဈနတေယျ စတဲ့ သဘာဝလှနျအကွောငျးတှကေလညျး ရှိနတေော့ဗြာ Credit Review Zawgyi ဇာတ်ကား တစ်ကားရှိတယ် အဲ့ကားက မြောက်ကိုရီးယာမှာ ကြည့်ရင် သေဒဏ်ထိ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်။ အာ့ဆို ...
Blood Diamond (2006) Imdb 8/10 (သိမ်းထားချင်သူတွေအတွက် အမိုက်စား ဘာသာပြန် အမိုက်စား Blue Ray Quality ဖြင့် တခုတ်တရတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ..။) တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာ သံယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတယ်ဆိုရင် အဲဒိတိုင်းပြည်ဟာ တိုးတက်ဖို့နဲ့ ယှဉ်ရင် ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ် ။ အာဖရိကရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရှာတွေ့တာနဲ့ လူပေါင်းများစွာဟာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး သေဆုံးကျရပါတယ် ။ ဆင်စွယ် ၊ ရာဘာ ၊ ရွှေနဲ့ ရေနံ အတွက်အပြင် အခုဆိုရင် စိန်အတွက်ပါ လူတွေဟာ သေဆုံးနေကြရရှာတယ် ။ ဒီစိန်တွေ ရရှိလာတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ပြည်တွင်းစစ်တိုက်ဖို့ လက်နက်ဝယ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးပြုတယ် ။ အဲဒိဒေသက ထွက်တဲ့ စိန်ရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံကို အမေရိကန်က ဝယ်တယ် ။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီစိန်တွေဟာ ဈေးကွက်ငွေလည်ပတ်မှုရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ် ။ အာဖရိက အနောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လီယွန် စိန်ထွက်ရာ ဒေသ ...
IMDB: 8.0/10 464,893 votes
Exam (2009) 2010 ကထွက်တဲ့ Deadpoolမင်းသား Ryan Reynolds သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Buriedဆိုတဲ့ကားလေးကိုလဲ ကြည့်ဖူးကြမှာပေါ့ ပြသချိန် ၁နာရီခွဲခန့်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကို အခေါင်းလေးတစ်လုံးထဲမှာပဲ လှည့်ပတ်ရိုက်ပြသွားတယ် အခုဒီ Exam ဆိုတဲ့ကားလေးလဲ အဲ့လိုမျိုးပါပဲ အခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာပဲ တစ်ကားလုံးပြီးသွားတာပါ 2009 ကထွက်ခဲ့တဲ့ ဒီindieကားလေးဟာ 600,000 USD သာ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ် တစ်ကားလုံးကို အခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာပဲပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဆုတွေလဲ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်...... တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုး ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ပွားနေချိန် လူတွေက ရောဂါအကူးမခံရဖို့ကိုသာ အာရုံစိုက်နေရပြီး အလုပ်အကိုင်တွေလဲရှားပါးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုက အလုပ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးပါ အလုပ်လိုချင်တဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာထဲကမှ နောက်ဆုံးစကာတင် ရှစ်ယောက်ပဲကျန်တယ် အဲ့ရှစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုထပ်ဖြေခိုင်းတယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက် ၃ချက်ထဲရှိတယ် စည်းကမ်းဖောက်ရင် အထုတ်ခံရမယ်ဖြေဖို့သတ်မှတ်ချိန် မိနစ် ၈၀ပေးထားတယ် သူတို့အတွက်စားပွဲပေါ်မှာပေးထားတာက ခဲတံလေးတစ်ချောင်းစီနဲ့ စာရွက်တစ်ရွက်စီ အားလုံးက မေးခွန်းစာရွက်လို့ထင်နေပေမဲ့ တကယ်တမ်း စဖြေလို့ရပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ စာရွက်က အလွတ်ကြီး! အဲ့တော့ ဘာကိုဖြေခိုင်းတာလဲ? သာမန်စာမေးပွဲလို စာရေးရမှာမဟုတ်ရင် ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ? ဘာလို့ဒီကုမ္ပဏီက အလုပ်လေးတစ်ခုခန့်ဖို့ကို အဲ့လောက်ထိရှုပ်ထွေးနေရတာလဲ? သာမန်ရွေးချယ်မှုလေးမဟုတ်ရင် ...
IMDB: 6.9/10 93,167 votes